GNOME 42.1 inosvika nekutanga kugadzirisa kwedesktop | Linux Addicts
GNOME 42.1 inosvika nekutanga kugadzirisa kwedesktop inoshandiswa naUbuntu 22.04, pakati pevamwe.
pablinux | 30/04/2022 13:00 | Desks
Iko hakuna vashoma vanotaura izvozvo, kana iwe uchitsvaga iyo yakachena yeGNOME ruzivo, iyo inoshanda sisitimu yekushandisa ndeye Fedora. Asi iyo vhezheni ichashandisa GNOME v42, Fedora 36, ​​ichirimo beta chikamu, saka iyo inonyanya kufarirwa system iri kutoishandisa ndeye Ubuntu 22.04. Pakupedzisira, kugovera kupi kunoshandisa chisiri chinonyanya kukosha, kana kuti hachisi muchinyorwa chakaita seichi chinotarisa kuburitswa kumwe, kwe GNOME 42.1.
Iyi ndiyo yekutanga poindi yekuvandudza yeGNOME 42, uye yauya mavhiki mashanu mushure mekuburitswa kwekutanga. kuenda kunogadzirisa zvikanganiso zvavanga vachiwana panguva iyi. Sevazhinji venyu munotoziva, GNOME haisiyanise pakati pedesktop, maapplication nezvimwe, uye inosanganisira zvese zviri pasi pezita reprojekiti, saka GNOME 42.1 inounza zvitsva kunharaunda yegraphical uye kune yese software.
Zvimwe zviri zvitsva muGNOME 42.1
GNOME Software yakagadziridzwa, iyo ikozvino inogadzirisa zvirinani Flathub repository uye Flatpak application mune zvese, mamwe ma tweaks akaitwa kune iyo interface uye bug yakaitika muFedora uye yakakonzera kuti mamwe marepositori avharwe akagadziriswa.
Mafaira, iyo yekare yechinyakare Nautilus, ikozvino inotsigira HighContrast, inogona kufanorodha ruzivo kubva kune ekunze mafaera mune rondedzero yekutarisa, uye yakavandudza rutsigiro rwerima mode.
Iyo control centre app yakagadzirisa tsikidzi dzakatenderedza mamonita mavara, yakagadziridzwa manejimendi eVPN yekubatanidza uye maakaundi epamhepo, pakati pezvimwe zvinogadziriswa.
Yakavandudzwa Calendar Widget.
Iyo Connections app ikozvino inotsigira kudzoreredza uye kuwedzera maonero.
Mimhanzi yawedzera shuffle sarudzo.
Kuvandudzwa kwemupepeti wemavara akaunzwa muGNOME 42.
GNOME 42.1 ikozvino iripo, uye sezvisungo zvekufarira tine tarball pano uye source code pano. Mamwe mapurogiramu achaonekwa paFlathub munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 42.1 inosvika nekutanga kugadzirisa kwedesktop inoshandiswa naUbuntu 22.04, pakati pevamwe.
Yemahara, yemahara kana yakabhadharwa Ndeipi maturusi ekuvandudza webhu kusarudza?
Redis 7.0 inosvika nekuvandudzwa kwekuita, kugadzirisa mabug nezvimwe